Akubona bonke abantu bangaphila ndawonye ukuphila. Yini ekhangwa uzakwethu ekuqaleni ubuhlobo, iqala ukucasula, kukhona ukucindezeleka nolaka lwabantu. Ngenxa yalokho, imikhaya eminingi behlukana, kwaba inqubo kunalokho ezingemnandi amacala ezehlukaniso. Uma bobabili kwabashadile isakhuluma behloniphana, kulapho ngokuvamile isehlukaniso Kwenziwa angabacwasi ngokushesha futhi ngaphandle imithetho engadingekile. Nokho, wonke umuntu uyazi ukuthi eziyinkimbinkimbi kakhulu kangakanani uma umndeni unezingane ezincane. Ngokuqondene isehlukaniso phakathi nenkathi yokukhulelwa? Kanjani ukwenza kulesi simo, ngokusebenzisa izinqubo ezingokomthetho adingekayo ukudlulisela lezi zithandani ukuthi ashiye umthetho?
Ngaphansi Ikhodi Family, kokuhlukanisa noma inkantolo noma ehhovisi Registrar lapho umshado esangena. Kulo mBhalo, isehlukaniso uvunyelwe ezimweni eziningana:
Lapho bobabili indoda nenkosikazi ufuna ukushiya;
uma indoda nomkayo akudingeki izingane;
lapho abashadayo akudingeki nomunye izimangalo bemvelo zezimali futhi asidingi division ngempoqo impahla.
Kuzo zonke ezinye izimo, labo abashadile kufuneka bazame aye enkantolo. Ngisho noma lo mbhangqwana has ingane, kodwa babuye bashintsha umqondo zonke izindaba ngobungane, amakhotho adingakala lokuqoka inani nesondlo. Isehlukaniso ngesikhathi sokukhulelwa kulokhu iyathinteka. Lo mntwana kakade lapho, kodwa iqiniso lokuthi akazalwanga kodwa akashintshi isimo.
Nokho, sihlolisise zonke izindaba.
Isehlukaniso ngesikhathi sokukhulelwa ngokwalokho umyeni
Indoda ingabonisa ukuqalisa isehlukaniso futhi zizithobe indikimba yabahluleli elihambisana icala. Nokho, kulesi simo, ke kuyadingeka ukuba ukuthola imvume ka umkakhe. Njengoba nje abantu ababili ukuza isinqumo ezivamile, basuke isicelo futhi elinde kwesivivinyo esimisiwe.
Njengoba icala liqulwa yenqubo Ukubuyekeza uzokubuza umyeni wakhe, uma efuna ukuba ashiye umyeni wakhe. Uma ukuthi awushintshe umqondo wakhe kwesokudla egunjini lokuqula icala, ukucabangela isehlukaniso ngesikhathi sokukhulelwa izomiswa. Ijaji ungenqaba sivule kabusha icala kuze kufike leso sikhathi ingane ize kuyinto ezingu-12.
Ingabe indoda ukuba ihlukane nomkayo abakhulelwe ngaphandle kwemvume yakhe
Ngokomthetho, esishade naye bangaba umqalisi yesehlukaniso, kuyilapho enye ingxenye yakhe usesimweni ezithakazelisayo. Yiqiniso, angase afake isicelo ukuthi abasebenzi ejensi ziyadingeka ukuthatha. Nokho, ku-call yokuqala, noma unkosikazi ecaleni wayehlale wenqaba. Uma oshade naye ukunikeza nobufakazi obungenakuphikiswa ukuze inkantolo onke okukhulelwa kwakhe, ngesinqumo-100% amacala zizokwenziwa esivuna yayo.
Lo mkhuba ukhona ukuze kuvikelwe abesifazane zisesimweni esibucayi kusukela ukushaqeka ezengeziwe sezinzwa. Ngaphezu kwalokho, kukhona amacala lapho umyeni ngemva kokuzalwa komntwana washintsha isimo sakhe sengqondo, futhi wahlala ukuphila nge uhhafu wakhe.
Isehlukaniso unkosikazi isinyathelo
Uma unkosikazi unomuzwa wokuthi kufanele athwale ingane kude umyeni wakhe, kuleso simo inkantolo futhi uzahlangana wesifazane. Inkosikazi unelungelo esisemthethweni ukusebenzisa isahlukaniso ngesikhathi sokukhulelwa unilaterally. Wacela kumyeni wakhe ayidingekile.
Uma umngane womshado kuyinto ngokunamandla ngokumelene engasithola isahlukaniso, ungaya enkantolo bese uzama inselelo kwesimangalo inkosikazi yakhe, kodwa igama elithi esiphezulu ukuthi kunikezwa yebhangqa yokuthi isinqumo sokugcina ngokuvamile isikhathi esingaphezulu kwezinyanga ezingi-2-3. Uma owesifazane sesimweni ezithakazelisayo futhi kuphoqa ahlukaniso ngalesosikhathi 99% isehlukaniso ngesikhathi sokukhulelwa ngokusuka lomkakhe kwenziwe ngokushesha.
Kwezinye izimo, ijaji enquma ukupha umbhangqwana ngenyanga emuva, uma ebona ukuthi owesifazane ufuna ukuba ahlukanise bedle yokwehluleka kwemizwa, ukwehluleka hormone. Kodwa uma ukuhlukunyezwa sabhalwa nowesifazane, noma inkosikazi yavuma ukuthi ingane yomunye umuntu, khona-ke isehlukaniso senzeka ngokushesha.
Ukuze ufake isicelo sesehlukaniso ngo-ukukhulelwa (lapho bobabili abashadile uyavumelana), kubalulekile ukulungiselela iphakheji kwemibhalo. Ngaphezu isicelo, uzodinga:
isitifiketi kusuka esibhedlela eqinisekisa nokukhulelwa;
imibhalo eziye ikhishelwa owakwakhe ngesikhathi umshado;
ukushaja komsebenzi wombuso (mayelana 700 ruble);
ireferensi eqinisekisa nesimo sezimali abashadayo.
Uma kudingeka, inkantolo kungadinga namanye amadokhumenti. Konke kuncike isimo esithile.
Ukondla obushade naye emuva kwesehlukaniso ngemva kokwehlukana
Ngokomthetho, owesifazane okhulelwe ngemva kwesehlukaniso unamalungelo efanayo owayengunkosikazi unkosikazi nengane. Ngakho, kufanele athole ukondla obushade naye emuva kwesehlukaniso kusukela umyeni wakhe phakathi neminyaka zonke izinyanga ezingu-9 kanye neminyaka engu-18 ngemva womntwana ozalwa.
Nokho, ngokuvamile kakhulu inqubo yokunquma inani ukuthi umyeni wangaphambili liyadingeka ukukhokha ingxenye yemali ayengaphansi, imisiwe. Njengomthetho, ngemva kwesehlukaniso ngesikhathi sokukhulelwa lomkakhe ukhuphukela engu-3, kanti inkantolo inquma solvency babantu. Noma kunjalo, lokhu akusho ukuthi umyeni ngeke kufanele ukhokhe imali ephelele, kusukela ngosuku kuqedwa umshado.
Ngokuvamile, ingane support ukubala inqubo imisiwe ngenxa yokuthi abayeni babo bayenqaba ukunikeza ex-nawomkabo nabantwana ongakazalwa. Kulokhu, ikhambi enengqondo kunazo kungaba owesifazane ukufaka isicelo ukusungula ubuyise enkantolo. Uma kuvela ukuthi owawushade naye ngempela uyise womntwana, khona-ke ngeke uhambe kwezinye izimpikiswano ngokwenqaba ukukhokha.
Abesilisa kufanele baqaphele caveat esisodwa esibalulekile. Uma umyeni ohlukanisa nomkakhe nje kokuba kungokuvumelana (hhayi ukhulelwe), futhi izinsuku 300 ngemva kokufa umshado umfazi lo waba nomntwana ke inkantolo kayise owayengumyeni wakhe kuyoba ngokuzenzakalelayo. Ngenxa yalokho, nezibopho zomthetho ofanayo (yesondlo) kungenziwa onikezwe ke. Yingakho abameli musa batusa ukungena nobuhlobo obuhle abalingani bakhe bangaphambili ngemva kwesehlukaniso.
Inkinga enzima amacala ezehlukaniso - iwukuba uhambe ngalo. I nzima kakhulu ukuba ubhekane nezingcindezi esekwamukele ngowesifazane ukhulelwe. Kulokhu, odokotela bengqondo batusa kakhulu ukuvakashela abameli nje kuphela kodwa futhi ochwepheshe abazokusiza ukubhekana aspect zokuziphatha yesehlukaniso.